Qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkii jaa'id ee Ole Gunnar Solskjær ka hor kulanka Caawa ee PSG %
Qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkii jaa’id ee Ole Gunnar Solskjær ka hor kulanka Caawa ee PSG
By Ramzi Yare	 Last updated Mar 6, 2019
Tababare Ole Gunnar Solskjær oo ka hadlayay kulanka ayaa yiri” Waa tijaabo adag, Balse waan sameyn karnaa, Waxaan u baahanahay goolka koowaad si aan ciyaarta ugu sii jirno, Wax walba way dhici karaan, Waxaana u baahanahay qorshe wanaagsan.
Macalin Ole Gunnar Solskjæroo ka hadlayay inuusan ka rajo dhigin kulanka ayaa yiri” Qof kasta wuu og yahay inaan sameyn karno, Waana soo qabanay, Sanadkii tagay Juventus ayaa qasaaro 3-0 ah kala kulantay R.Madrid kadib 3-0 ayay ugu badaleyn, Sidoo kale PSG vs Barcelona, Waxaa jiro tusaalooyin badan oo kooxaha ah kuwaas oo natiijada u badali karo sidaaan oo kale”.
Ole Gunnar Solskjær oo ka hadlayay da’yarta Academy ayaa yiri” Ciyaaryahan kasta oo da’yar ah una ciyaara kooxdan riyadiisa ayaa ah inuu sameeyo waxa uu sameeyay Rashford, Caawa waxaa laga yaabaa in ay fursad u helaan kulanka qaar ka mida dhalinyarada.
Ole Gunnar Solskjæroo ka hadlayay xaalada dhaawac ee Man United ayaa yiri” Waxaa inaga maqan 10-ciyaaryahan kulanka PSG, Sidaasi darteed waa inaan sameynaa wax ka duwan, Waan awooday inaan abuuro shax wanaagsan oo 4-3-3 ah kuwaas oo ah ciyaaryahano ku heer ah champions league.
Sidoo kale Ole oo Sanchez ka hadlayay ayaa yiri” Waxa ay ahayd dhaawac daran oo jilibka ah, Waxaana laga yaabaa inuu maqnaado 4-6 toddobaaad, Waxaan rajeynayaa in uu usoo kaban doono si dhaqso ah”.
. Ole oo ka hadlayay Williams ayaa yiri” Brandon,Waxa uu ka ciyaara danbeedka midig ee dafaca sidoo kale waxa uu ka ciyaari karaa 2-garab danbeed ee daafaca, Waana markii ugu horeysay ee uu nala soo safro, Isaga ma uusan fileyn inaan u wacno.
Virgil Van Dijk oo ka hadlaayay ku guuleysiga cayaaryahanka ugu fiican…
Manchester United oo mucjiso taariikh ah ku dhigtay PSG